Shape memory machira - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Shape memory machira
Akangwara chimiro ndangariro machira emuchadenga anoreva rudzi rwezvinhu izvo zvinokwanisa kudzosera chimiro chayo chekutanga pasi pemamwe mamiriro (kunetseka, tembiricha, etc.) mushure mekushomeka kwepurasitiki. Chimiro chayo chepakutanga chinogona kugadzirwa mumutsara wakananga, wave, helix kana mamwe maumbirwo, iyo inogona kupatsanurwa kuva chimiro ndangariro alloy fiber, chimiro memory memory polymer fiber uye chimiro ndangariro basa fiber yakagadziriswa neanopedzisa mumiriri. Shape memory alloy fibers ine hunhu hwekunetseka ruoko ruoko uye kupora kwakasimba. Zvinogona kushandiswa seyarn cores uye mamwe machira kupinza fancy yarns ane chimiro memory memory uye yakarukwa kuita anoshanda machira. Kune akawanda marudzi emhando yekuyeuka ma polymers, kunge polyurethane, polylactone, fluorine-ine polymer uye polyborneene, pakati payo chimiro ndangariro polyurethane yakavakirwa zvakanyanya uye inoshandiswa nekuda kwekudaira kwayo, rakakura chimiro, uremu huremu uye mutengo wakaderera. Shape memory polymer fiber ine zvakawanda zvakanaka, sekunyorova kweruoko kunzwa kana ichienzaniswa nechimiro memory alloy fiber, nyore kugadzira uye ine yakanaka chimiro chimiro, yakakura inogona kuchinjika huwandu hwemakemikari zvivakwa, kunetsa kusvika 300% kana zvakakura, saka ine tarisiro yakakura yekushandisa mumachira. In ramangwana, iyo huru yekuvandudza kutungamira kwechimiro memachira micheka ichave dhizaini yegirini yekuchengetedza zvakadzivirirwa zvinhu, iko kutsvagiridzwa nekusimudzirwa kwezvakawanda zvekuyeuka zvigadzirwa uye huwandu hwekugadzirwa kwezvinhu.
Mhezi inodzivirira, kutsvaira-kudhonza uye kufema chimiro ndangariro memarara
Tsvagiridzo yemhando yekuyeuka machira kunze kwenyika yakatanga kutanga, nehuwandu hwakasiyana hwekushandiswa kwemusika, yakakwirira yakazara hunyanzvi hwechigadzirwa, data rakapfuma masosi uye hwakawanda hwehungwaru. parizvino, kufambira mberi kukuru kwakaitwa mukutsvagirwa kwemhando yekurangarira fungus muJapan, United States, United Kingdom, Italy neNetherlands. Semuyenzaniso, iyo Italian kambani yakagadzira a "hembe yeusimbe" nekuyeuka kwechimiro nekuwedzera nickel, titanium uye nylon kumucheka. Paunenge uchigadzira zvipfeko zvechiratidzo che scald, Briteni machira emicheka akazoona rakabudirira tsika yeyemukati memory alloy smart machira. Nickel-titanium alloy fiber yakagadziriswa nekugadziriswa mukati mezvipfeko. Paakangosangana neyekumusoro-kupisa chimiro memory memory, ingafare kuwana chinangwa che scald proof. Inotsigirwa yeJapan \_ 's mitsubishi maindasitiri anorema akagadzira chinyorwa chitsva chine basa rechimiro chekurangarira polyurethane kirasi Diaplex, rudzi urwu rwemamoni composite membrane uye machira ehembe, kwete chete kuratidza yakakwirira mvura reperihlon, uye kuburikidza nekudzora kwekupisa, inogona kuva pane inopfeka metabolic kupisa inoburitswa nemhinduro yehungwaru, yakakodzera kugadzirwa ine chimiro chekuyeuka uye inogona kugadzirwa kana kupisa uye kunyorova munzvimbo yekushisa tembiricha iri yakakwirira nzira nzira dzakawanda dzinoshanda dzekupfeka dzakanaka, kune urwu rudzi rwezvinhu kushambadzira kwezvakagadzirwa, sehembe dzakangwara, kukwezva kupfeka, nezvimwewo.
Kushandiswa kwechimiro chekurangarira alloy akangwara machira mune scald - zvipfeko zvinoratidza
Mamwe mabhizinesi epamba kana masangano ekutsvagira akafambira mberi zvakanyanya mukuvandudza nekushandiswa kwemaumbirwo emicheka. Semuyenzaniso, tianjin yunivhesiti ye tekinoroji yakarongedza Thermally yakamisikidza chimiro chendangariro memory nekushandisa tekiniki yekupedzisa tekinoroji kugadzira firita. Iyo Hong Kong polytechnic yunivhesiti chimiro ndangariro yekutsvakurudza nzvimbo yakagadzira iyo cellulose yakavakirwa chimiro memori machira, uyezve nekudzidza kwekuumbwa, kurongeka kweyekuchenjera chimiro ndangariro fiber chimiro gadziriro yemhepo tembiricha uye mhedzisiro yekutsungirira uye ndangariro mu win min chimiro ndangariro mapolymers uye chimiro ndangariro maski kutsvakurudza vanoita basa rakakosha. Kuenzaniswa nemabhizimusi ekunze, kune zvakawanda zvinotsvagirwa pamhando yekuyeuka machira emuchina kuChina, asi vazhinji vacho vachiri muchikamu chekuyedza, ine zvigadzirwa zvega uye isina kukwana huwandu hweruzivo, uye mazhinji acho ari ekutevera zvidzidzo. Mhando dzakawanda nyowani dzichiri kuvandudzwa uye hadzisati dzakwanira kugadzirwa kukuru kwemaindasitiri.
Kuti uwane rumwe ruzivo, Ndokumbira utarise kune mishumo yeku China yekugadzira machira mukugadzirwa 2019.
Wati wamboona maficha ekunyepedzera anotaridzika kunge penguin fluff?